Grab နှင့်အကျိုးတူယာဉ်မောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာရန်အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ ? – Driver
Grab ၏ အကျိုးတူယာဉ်မောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာရန်အတွက် သင့်မှာ-
- ယာဉ်မောင်း (ဃ) လိုင်စင်အညို သို့မဟုတ် (င) လိုင်စင်အနီ
- သင်မောင်းနှင်မည့် ကားလိုင်စင် နှင့် ကား Wheel Tax
မေးခွန်း - မိမိကားနှင့် Grab ကို ချိတ်ဆက်မောင်းနှင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘယ်အဆင့်ကိုဆက်လုပ်ရမလဲ ?
ဖြေ - အထက်ပါ အချက်အလက်များပြည့်စုံရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် Grab ရဲ့ ရုံးခန်းသို့လာရောက်ပြီး သင့်ကား၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အဲကွန်းကောင်းမွန်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ Grab နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းရန် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ Grab application ကို အသုံးပြုရန်နှင့် Grab ရဲ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိုသိရှိရန် သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မေးခွန်း - Grab ရုံးသို့ လာရောက်စရာမလိုပဲ Grab နှင့် ချိတ်ဆက်၍ရနိုင်ပါသလား ?
ဖြေ- မရနိုင်ပါ။ လိုအပ်သော အချက်အလက်များနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သေချာနားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက် သင်တန်းပို့ချမှုအား တက်ရောက်ရန်လိုအပ်သလို၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း အခက်အခဲများကြုံရပါက မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို အကြံဉာဏ်ပေးသွားမည်ဖြစ်တာကြောင့် သက်ဆိုင်သည့်သင်တန်းပို့ချမှုကို မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။